कालोमोसो दल्छु भन्ने मेयरको चर्तिकला (प्रमाणसहित)
कालोमोसो दल्छु भन्ने मेयर द्वारिकलाल चौधरीको चर्तिकला (प्रमाणसहित)
इटहरी । उपमहानगरपालिकाको पुरानो बिल्डङको छेवैमा रातो छानो भएको एक तल्ले छाप्रोे छ । त्यही छाप्रोभित्र छन् मेयर द्वारिकलाल चौधरी उपमेयर लक्ष्मी गौतमका कार्यकक्षहरु ।
पोखरीभित्रै पिल्लर गाडेर बनाइएको अर्कोे भवनमा चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव विमलीको कार्यकक्ष छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीको कार्यकक्ष मेयर भवन निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । यो समाचार अनलाइन खबरमा छ ।
कर्मचारीले विना टेण्डर कोटेसनमार्फत गराएको कामलाई मेयर चौधरी नेतृत्वको कार्यपालिका बैठकले भुक्तानी दिने निर्णय गरे सदर गरिदिएको कागजात अनलाइनखबरले फेला पारेको छ ।
नेकपा नेता एवं मेयर चौधरीले आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी बताउँदै आएका छन् । मेयरले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा पनि भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलता अपनाउने भन्दै आफ्नो अभियानमा सहयोग गरिदिन सबैसँग आग्रह गरिएको छ ।
तर, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भन्ने मेयर चौधरी अहिले त्यही भवनमा बसिरहेका छन्, जहाँ गरिएको अनियमिततालाई उनकै नेतृत्वमा बसेको कार्यपालिका बैठकले सदर गरेर भ्रष्टाचारलाई बैधानिकता दिएको छ ।
रातो छानाभित्रको कालो कथा ?
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सरकारी निकायले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका कामहरु गर्दारगराउँदा सार्वजनिक सूचनामार्फत टेण्डर आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाबाट गराउनुपर्छ । तर, इटहरी उपमहानगरपालिकाले ५ लाखभन्दा बढीको एउटै आयोजनालाई टुक्राएर कोटेसनमार्फत विानप्रतिस्पर्धा काम गराउँदै आइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७३र०७४ मा ‘मेयर भवन’ बनाउने निर्णय उपमहानगरपालिकाले गर्‍यो । ०७४ असारपछि मेयर द्वारिकलाल चौधरीले चुनाव जितेर जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मेयर भवन बनिरहेको थियो । यो भवन बनाउने निर्णय मेयर चौधरीले गरेको नभएर चुनावअघि नै कर्मचारी र दलहरुको सर्वदलीय संयन्त्रले गरेको थियो ।
गाह्रो नलगाइकन आल्नुनियम पार्टेसन गरेर बनाइएको यो एकतल्ले छाप्राको कुल लागत उपमहानगरपालिकाको रेकर्ड अनुसार ३३ लाख ५ हजार ३४० रुपैयाँ परेको छ । तर, ३३ लाखको भवन निर्माण गर्दा टेण्डर जारी गरिएन । बरु प्रतिस्पर्धालाई छल्नका लागि ५ लाखभन्दा मुनिका विभिन्न ८ वटा टुक्रामा विभाजन गरेर कोटेसनमार्फत काम गराइयो । एउटा छाप्रो बनाउन बेग्लाबेग्लै ८ वटा टेकेदार कम्पनीहरु खटे । कसेले चर्पी बनाए, कसैले जग हाल, कसैले झ्याल बनाए त कसैले रंग लगाए । यसरी विना प्रतिस्पर्धा कोटेसनबाटै ३३ लाख रुपैयाँ लागत देखाइयो ।
मेयर भवनमा रंग लगाउन इनरुवाको कुशल निर्माण सेवालाई ४ लाख ८ हजारमा जिम्मा दिइयो । झ्याल ढोकाका लागि धरानको मुनाल कन्स्ट्रसनलाई ४ लाख ९२ हजारमा दिइयो । मेयर भवनको प्रि–फ्याबका लागि कोशी गाउँपालिकाको बाबा बुदेश निर्माण सेवालाई ४ लाख ९६ हजारमा ठेक्का दिइयो ।
त्यसैगरी मेयर भवनमा ट्रस लगाउन पश्चिम कुसाहाको जय बजरंगबली निर्माण सेवालाई २ लाख ६ हजारमा दिइयो । युपीभीसीका लागि दीप एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सनलाई ३ लाख ५२ हजारमा जिम्मा दिइयो ।
मेयर भवनको जगको काम गर्न इनरुवाको सेलेस्टि कन्स्ट्रक्सनलाई ४ लाख ८० हजारमा कोटेसनबाट ठेक्का दिइयो भने मेयर भवनको फिलिङ तथा फ्लोरिङका लागि श्रीपुरस्थित हरिना निर्माण सेवालाई ४ लाख ८० हजारमा दिइयो ।
अनि मेयर भवनको चर्पी बनाउनका लागि इनरुवाको योगराज निर्माण सेवालाई ३ लाख ८९ मा दिइयो । यसरी एउटा एकतल्ले छाप्रो निर्माणका लागि ५ लाखभन्दा मुनिका ८ वटा कोटेसनमार्फत काम गरेर जात्रा देखाइयो ।
एउटा सामान्य छाप्रो बनाउनका लागि विनाप्रतिस्पर्धा ८ वटा ठेक्कामार्फत ३३ लाख रुपैयाँ चर्ख भएपछि केही जनप्रतिनिधिले यसलाई पत्याएनन् । मेयर र उपमेयरको कार्यकक्ष निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको निश्कर्षसहित नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छवि रिजालले ठेकेदारहरुलाई भुक्तानी दिन मानेनन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले भ्रष्टाचारजन्य काममा भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेपछि ०७५ भदौ ३१ गते मेयर द्वारिकलाल चौधरीको नेतृत्वमा बसेको कार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष रोहितकुमार चौधरीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गर्‍यो ।
कार्यदलमा वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष कल्याणबहादुर कार्की, कार्यपालिका सदस्य गायत्री चौधरी, बरिष्ट इञ्जिनियर अर्जुनकुमार दाहाल र इञ्जिनियर महेश धिताललाई सदस्य बनाइयो ।
अन्ततः कार्यदलले डेढ सातामै स्थलगत अध्ययन गरेर भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको भन्दै ०७५ असोज १८ गते बसेको अर्को कार्यपालिका बैठकले आठैवटा ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
तर, विनाप्रतिस्पर्धा गरिएको भवन निर्माणमा अनियमिता भएको भन्दै उपमेयर लक्ष्मी गौतमले कार्यपालिका बैठकमा आपत्ति जनाइन् । गौतमले बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको इटहरी उपमहानगरपालिका स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
उपमेयरजस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छवि रिजाल पनि भुक्तानी दिन नहुने पक्षमै थिए । तर, मेयर चौधरी भुक्तानीको पक्षमा उभिएको हुनाले रिजाल माइन्युटमा सहीछाप गर्न बाध्य भए । असोज १८ को कार्यापालिकाको निर्णयमा रिजालको समेत हस्ताक्षर देखिन्छ ।
‘मेयर भवन’ बनाउँदा कोटेसनमार्फत काम गराउनेमा तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख टीकादत्त राईको निर्णायक भूमिका थियो । उनी वीचैमा सरुवा भएपछि सागर मिश्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आए । उनै मिश्रका पालामा इटहरी उपमहानगरपालिकामा सीएफएल खरिद काण्ड भयो । मिश्र मेयर भवनका ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन नभ्याउँदै सीएफएलको चेकमा सही गरेर झापाको गौरादह नगरपालिकामा सरुवा मिलाएर गए ।
मिश्रको सरुवापछि छवि रिजाल इटहरीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्न पुगेका हुन् । तर, रिजालले कार्यपालिकाबाट निर्णय भए पनि मेयर भवनको भुक्तानी दिन मानेनन् । असोज १८ गते कार्यपालिका बैठकले भुक्तानी दिने निर्णय गरेपछि रिजाल चेकमा सही गर्न नमानी सरुवा मिलाएर काठमाडौंतिर लागे ।
रिजाल गरिवी निवारणमा सरुवा मिलाएर हिँडेपछि अहिले इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा केशव विमली कार्यरत छन् । तर, विमलीले पनि अहिलेसम्म मेयर भवनको भुक्तानी दिएका छ्रैनन्, जसले गर्दा गत साल असोज १८ को कार्यपालिका बैठकको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । मेयरले गराएको निर्णय प्रशासकीय अधिकृतले मानेका छैनन् । प्रशासकीय अधिकृतलाई उपमेयरको साथ छ ।
ठेकेदारहरुले भुक्तानी मागेका माग्यै छन् । तर, यो प्रकरण अहिले अख्तियारसम्म पुगेको अवस्था छ ।
सबै काम कोटेसनबाटै इटहरी उपमहानगरपालिकामा टेण्डरलाई छलेर कोटेसनमार्फत काम गराइएको मेयर भवन र सीएफएल खरीदमा मात्रै होइन । जस्तो– वडा नम्बर ७ को कार्यालय मर्मत गर्दा टेण्डर छल्न ४ लाख ७६ हजारको एउटा र ४ लाख ९७ हजारको अर्को कोटेसनमा काम गराइएको छ ।
७ नम्बर वडा कार्यालयको एउटै भवन मर्मतमा इटहरीको न्यु कोशी कन्स्ट्रक्सन र बिराटनगरको श्रीगणेश निर्माण सेवालाई कोटेसनमा बेग्लाबेग्लै ठेक्का दिइएको छ । यसमा पनि कार्यपालिका बैठकले भुक्तानी दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
इटहरीको सांस्कृतिक भवन मर्मत प्रकरण त झनै हाँसोलाग्दो छ । एउटालाई चर्पी मर्मत गर्न र अर्कोलाई भवन मर्मत गर्न ठेक्का दिइएको छ । यसमा पनि ५ लाखभन्दा माथिको परियोजनामा टेण्डर छलिएको देखिन्छ ।
सांस्कृतिक भवनको शौचालय मर्मत गरेवापत मधुवनस्थित चण्डी निर्माण सेवालाई ४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको छ । अनि, सांस्कतिक भवन मर्मतको जिम्माचाहिँ शौचालयभन्दा कम अर्थात ४ लाख ४४ हजारमा पश्चिम कुसाहाको जय बजरंग बलीले पाएको छ । बजरंग बलीलाई पनि भुक्तानी दिने निर्णय मेयर चौधरी नेतृत्वको कार्यपालिका बैठकले गरेको छ ।
मालपोत कार्यालयमा घुस लिएर काम, कलंकी मालपोतका नासु र खरिदार पक्राउ
विश्वकर्मा पूजा किन मनाइन्छ ? यस्तो छ रहस्य
केटाको खडेरी लागेपछि सामूहिक बिहेको अपिल गर्दै
माधवको अबको रणनीति : पार्टी सचिवालयमा एक्लिएका नेता /कार्यकर्ताको मन जित्ने योजनामा
साउदी तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण, इरानको संलग्नता पुष्टि
घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका कर्मचारीसंग साढे २७ लाख विगो
अण्डाको मूल्यले खर्च धान्न नसकेपछि व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा
तिनाउ मिसनको १ करोड कित्ता बढी शेयर सुचिकृत !
बोक्सीको आरोपमा कुटिएकी युवतीद्धारा आत्महत्याको प्रयास
BREKING : सुदूरपश्चिममा शक्तिशाली भूकम्प, नेपाल-भारत सिमा केन्द्रबिन्दु ४.४ रेक्टरको परकम्प